Blog Center & Resource CenterKimroy Bailey2020-04-11T20:23:54-05:00
MANDROSO FIVORIANA FIVORIANA SORATRA MANGALA AN'I STEP SOLAR # 1 Fianarana an-tserasera hianarana ny fomba fametrahana rafitra matotra iray an'ny Rafitra Solar Atombohy ny fianaranao solar now MITADY REHETRA IZAO Oniversite Trott Bailey Fanaovana marobe an'arivony tapitrisa Tsidiho ny Oniversite Trott Bailey Course amin'ny fametrahana ny masoandro SISTEM SIZING Hamarino fa tsy mitazona na manasongadina ny rafitry ny masoandro ianao Hijery horonantsary solar Rasta Robot Ataovy zava-dehibe tsy hay hadinoina ny hetsika manaraka anao JEREO NY FAHAGANANA VOLA World # 1 Robot fanabeazana RASTA ROBOT Mandehana avy amin'ny vao manomboka mankany amin'ny matihanina robotika Hijery horonan-tsary Rasta Robot Jereo ny horonantsary solar Hotel Jereo ny Lahatsary Fianakaviana
Ny fijerena ny angovo manerantany afaka manana ny rivotra ve ianao? Azonao atao ve ny mividy? Mipoitra ve any amin'ny firenena voafantina? Mitoetra ao amin'ny League of Arab States ve ny rivotra? Araka ny angovo Energy Association Association, ny 69% amin'ny solika eran'izao tontolo izao dia novokarin'ny firenena 10 anisan'izany i Etazonia, Saudi Arabia, Russia ary […]
Solombavambahoaka momba ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifa solar mba hosaronana
Ny herin'ny masoandro dia mbola foto-kevitra vaovao mahafinaritra ho an'ny olona maro. Ny mpanjifa mety misy dia hanana fanontaniana maro ka tokony ho vonona ianao hamaly am-pahatokiana ny fanontaniany rehetra. Ny fahatsapana voalohany voalohany mandritra ny fifampidinihana dia mety ho tsy fitovizan-kevitra eo amin'ny fahazoanao ny asa amin'ny mpifaninana. Ka ity misy torohevitra vitsivitsy momba […]
Rehefa nanomboka ny orinasan-jolomainty tany Kimroy Bailey Renewables aho dia te-hanana lisitra izay tokony hatao any am-piandohana. Nanoratra ity lahatsoratra ity aho ary namorona ny Mazava ho azy fa ny Step by Step Solar dia hanampy ireo mpandray anjara solar afaka hanainga amin'ny tongotra ankavanana. Misy […]
Noho izany dia manana hevitra lehibe ianao amin'ny fanaovana vola matotra avy amin'ny indostrian'ny masoandro izay an'arivony tapitrisa dolara fa tsy manana ny mpanjifanao voalohany. Aiza ianao no manomboka? Inona no lazainao? Ahoana no fomba hinoanao handresy lahatra ny tompon-trano iray mba hatokisanay ny herin'ny masoandro ao an-tranony sy ny zava-dehibe kokoa amin'ny volany? Raha […]
Tao anatin'ny dimy taona naharetan'ny masoandro dia nanao hadisoana be aho nandritra ny diako hamelomana ny orinasam-pananganana masoandro any Kimroy Bailey Renewables. Te hanampy anao aho hamonjy ny làlan'ny fianarana mianatra haingana kokoa noho ny nataoko ary izany no antony namoronanay ny Dingana Filazalazan'i Step Solar Installation […]
Ity horonantsary ity no voalohany amin'ny andiany amin'ny torolalana DIY torolalana momba ny fametrahana takelaka solar amin'ny tafo mivaingana. Ity torolàlana ity dia namboarina amin'ireo mpanamboatra angovo azo havaozina sy ireo tompon-trano izay liana amin'ny fametrahana ny rafitra keliny manokana. Asehony koa ny fomba ametrahantsika ny lalamby aluminium, mampifandray ny tariby, boaty combiner ary mihazakazaka ny […]
Kimroy Bailey Robotics sy ny oniversite teknolojia, Jamaica dia niara-nanolotra ny lasibatra tamin'ny lohataona fahavaratra izay siansa, Robotika ary angovo azo havaozina. Ny herinandro voalohany amin'ny toby fanavaozana fanavaozana misy antsika dia manavaka: ny fomba hanamboarana robot finday, fandaharana, fanaovana pirinty 3D, famoronana finday ary fampidirana ho an'ny angovo azo havaozina. Herinandro faharoa ao amin'ny toby […]
Angovo azo havaozina sy robotika hampivelatra ny toekarena
Angovo azo havaozina sy robotika afaka mampitombo ny toe-karena any Jamaika. Efapolo taona tao anatin'ny fitomboana 0-1% fotsiny no nanery ny fifindran'ny tanora avara-pianarana miasa any amin'ny firenen-kafa ary hanangana ny toekareny. Ity lahatsoratra ity dia fanamby ny mpitondra ao Jamaica hikatsaka angovo sy robotika havaozina mba hahatrarana ny fitomboana ara-toekarena mavitrika ahafahana mamerina ny […]
Kimroy Bailey nohavaozina Robotics Summer Camp
Kimroy Bailey Robotics sy ny University of Technology, i Jamaica dia niara-niasa tamin'ny toby Camps Science, Technology, Engineering and Matematika (STEM). The Kimroy Bailey Renewable Robotics Summer Camp dia notohanan'ny Vaomieran'ny Fikarohana siantifika sy ny GENNEX; natao hanitsiana ny fihetsik'ireo mpianatra amin'ny sehatry ny siansa, teknolojia sy fanavaozana (STI) amin'ny fampiasana ny mahavariana […]
Tsara ny taona 2014! Manidina tokoa ny fotoana. Tamin'ny taona nanorenan'i Kimroy Bailey Foundation ny famorian-drivotra voalohany niasa tao amin'ny Ivotoerana Community Renewable 100% any Trelawny. Ny taona Kimroy Bailey Robotics dia teraka ary nametraka tamin'ny maha-robotika lehibe indrindra an'i Karaiba, prototyping vokatra ary orinasa mpamokatra kely. Hmmm dia misy fanatanjahan-tena maro no […]
BaileyBionic, Jamaikana dia nanao tanana robotic
Kimroy Bailey Robotics dia nanao fampisehoana lehibe tamin'ny fanapahana jamaody Technologies tao amin'ny Forum Institute an'ny Jamaican (PIOJ). Ny tranoheva dia nanasongadina ireo teknolojia fampidirana an-tsokosoko anisan'izany ireo orinasa roa mpanonta 3D extruder XNUMXD; sarina BaileyBionic: ny andian-tsarin'ny orinasa robots toa ny olombelona sy BaileyBotic: ny andian-tsarandrafitry ny robote finday. BaileyBionic dia robotic […]
Ny fandraisana anjaran'ny tanora any Jamaika dia mijanona ho tsy miovaova. Ny feon'ny tanora dia tsy ampy amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fampandrosoana ny politika. Talk Up Yout '- fampisehoana lahateny tamin'ny fahitalavitra nasionaly nokarakarain'i Emprezz Golding - iray amin'ireo sehatra vitsivitsy natao hananganana ny fomba fihevitry ny tanora momba ny olana mahakasika ny tanora amin'ny vahaolana ho valiny farany. Hijery […]